Home News W/A/Dibadda oo been ku Tilmaantay Eedeyntii Wasiir-ku-xigenkeeda ay Saxaafadda u marsiiyeen X/Ilaaliyaha...
W/A/Dibadda oo been ku Tilmaantay Eedeyntii Wasiir-ku-xigenkeeda ay Saxaafadda u marsiiyeen X/Ilaaliyaha iyo Hantidhowrka kadib markii ay ku fashilmeen inay soo xeraan.
Wasaaradda Arrimaha dibadda ayaa war saxafadeed ay soo saartay ku sheetay in xeer ilaaliayah Axmed Cali Dahir iyo Hantidhowraha guud Maxamed Afgooye inay si sal fudeyd ah u magac dileen wasarradda iyagoona kaashaday xoog iyo ciidanka Boliiska si loo xero wasiir ka mid ah wasiiradda Wasaaradda oo hawshiisa gudanaya.
Waxaa wax lala yaabo ah in dawlad Hantidhowraheedii Guud iyo Xeer ilaaliyaheedii guud ay sharciga sidey rabaan u isticmaalayaan ama wasaarad iyadoo madaxdaas ay saxan yihiin khald ku eedeyn karta, si ay u duugto fal dambiyeedka madaxdeeda lagu edeeyey oo laba xafiis ee kale –Xeer Ilaalinta iyo Handhowrka- ay isku raaceen.
Haddaba, wasaaradda oo u muuqata inay xujo cad haysato ayaa soo saartay warsaxaafadeedkan hoose. Laakiin haddiiba xataa khaldaadkan ay Xeer ilaaliyuhu- hadda waa XEER ILAALIYIHII QARANKA- iyo Hantidhowraha guud ay u hayaan caddeyn ah in wasiirku uu ku kacay khalad wax isdaba marineed iyo mid maamul maxaa maxkamad looga yeei waayey ama loogu geyn waayey waraaq u yeeris ah inuu caddaaladda hor yimaado? Tolow ma aqoondarri baa jirta? Ma awood sheegad baa oo waa tii Cabdiraxman Cabdishakuur iyo Sanetor Qeybdiid? Misa waa dumin sharciga dalka maadaama aysan jirin cid kaa ceshaneysa oo garsoorkii waxaa u sarreeya inan yar oo aan waligii maxakamad fadhiisan kalana aqoon maxaa saxa ah maxaasa sirgaxan, barlamaankii waxaa soof tagay oo waxaaba laga yaabaa inay soo noqon waayaan inta sannadka ka dhiman maadaama xantu ay leedahay gurigii lagu shaqeyn lahaa ayaa muraayad ka jabtay oo la doondoonayaa. Madaxweynihii oo mooge ah markuu tallaabo qaadana mid laga cabsada qaado iyo R/Wasaare leh “ I can fly” oo inta labada gacmood kala wara inuu duuli raba u eg. Dalkaanow yaa ku leh?
Previous articleDawladdii Daah-furnaan, la dagaallanka Musuqmaasuqa iyo Nabad iyo nolol maxaa u dambeeyey Somaliya waa Dalka adduunku ugu musuq maaasuqa badan 2017/18
Next articleRW Kheyre: “Go’aanka Wasiirada cusub lagu magacabay, MW Farmaajo qayb buu ka ahaa”
Wasiir Islaaw oo shaqo joojin ku sameeyay Agaasimahii wasaarada!!